Calabot C Summa အသံ console သည် Chabot ကောလိပ်တွင်လက်တွေ့လေ့လာခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Calrec Summa အသံ console ကိုလက်ပေါ်ပေးပါသည် Chabot ကောလိပ်မှာသင်ယူ
Calrec Summa အသံ console ကိုလက်ပေါ်ပေးပါသည် Chabot ကောလိပ်မှာသင်ယူ
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန် - 29 အောက်တိုဘာလ 2015 - Chabot ကောလိပ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကာအသိအမှတ်ပြုအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်၎င်း၏မီဒီယာစင်တာမှာတီဗီစတူဒီယိုထဲမှာ Calrec Summa အသံ console ကို install လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ Chabot ကောလိပ်ထုတ်လွှင့်ကျောင်းသားများကိုယခုဒေသခံဖြစ်သော CBS Affiliate နှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားအခြားသူတွေကဲ့သို့တူညီသောစားပွဲပေါ်မှာသုံးပြီးလေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။ ပြင်ပမှာဘဏ်ဍာ၎င်း၏စတူဒီယိုထွက်ငှားရမ်းသည့်အခါပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံပစ္စည်းကိရိယာများထားရှိခြင်းကိုလည်းကောလိပ်စီးပွားဖြစ်အားသာချက်ကိုပေးတော်မူ၏။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်နှစ်ဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခု၏ရည်မှန်းချက်သူတို့ဘွဲ့ရသည့်အခါကျောင်းသားများရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသူတို့ကိုလက်ပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်း-စံပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေဟာတူညီတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်ပိုကောင်းအပေါ်လေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြ, "Sujoy K. Sarkar, Comcast 27 Chabot တီဗီ၏ဘူတာရုံအထွေထွေမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဒေသခံဘူတာရုံ KPIX ဖြစ်သော CBS Channel ကို5တစ်ခုကိုအတိအကျတူညီမော်ဒယ်င်နှင့်အခြားအဓိကထုတ်လွှင့်ကွန်ရက်များအဖြစ်ကောင်းစွာ Calrec အပေါ်အားကိုးသောကွောငျ့ "ကျနော်တို့ Summa ကို ရွေးချယ်. အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဘုတ်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူအားဖြင့်သူတို့ကလုပ်သားအင်အားဝင်သောအခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေဟာလျော့နည်းလေ့ကျင့်ရေးတောင်းမည်, သူတို့ကပိုအဖိုးတန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစေသည်ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုကအခြားအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကျော်တစ်ဦးအနားပေးသည်သာဖြစ်သည်။ "
ကျောင်းသားများကိုလည်း Chabot ကောလိပ်မှာအခြိနျပိုငျးအလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့သူ KPIX အသံအင်ဂျင်နီယာ Khash Naraghi မှ Calrec Summa ဘုတ်အဖွဲ့သုံးစွဲဖို့သင်ယူခြင်းနေကြသည်။ Naraghi console ကိုသုံးစွဲဖို့ကျောင်းသားများသွန်သင်ပြီးတော့သူတို့တစ်တွေထုတ်လွှင့်-ကွန်ယက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုထဲမှာစားပွဲတွေ့နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်သူတို့ကို Channel ကို5ဖြစ်သော CBS ၏ခရီးစဉ်ကိုပေးသည်။ သူတို့ရဲ့သင်တန်းအလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်, ကျောင်းသားများကျောင်းဝင်းတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ကေဘယ်လ်ရုပ်သံကျော်စာသင်ခန်းမှပိတ်ထားသော-circuit ကို TV ကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိသောပညာရေးအစီအစဉ်များကိုထုတ်လုပ်အားကူညီနိုင်ရန် Summa ကိုအသုံးပြုပါ။
"Summa ငါတို့ဟောင်းဘုတ်အဖွဲ့ကျွန်တော်ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေဟာကွိုတငျပွငျဆငျကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးအသံကိုင်တွယ်နှင့်အငှားလုပ်ငန်းသစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်, ဆိုလိုတာကနိုင်စွမ်းရှိခဲ့သည်ထက်လုပ်ဆောင်ချက်ကို၏ဝေး သာ. ကွီးမွတျအတိမ်အနက်ကိုပေးသည်," Sarkar ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအဖြစ် KPIX မှာထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တူတဲ့ဖို့ဒ Summa ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အပိုဆုအဖြစ်ကျနော်တို့ကိုကြီးစွာသောစျေးနှုန်းများအတွက်အပိုဆောင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတယ်။ "
Calrec အမေရိကန်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်း Manager ကို Dave Lewty Chabot ကောလိပ်ရဲ့လက်ပေါ်သင်ယူမှုဖို့ချဉ်းကပ်မှု admires ။ "Chabot ကောလိပ်ရဲ့ဆန်းသစ်အစီအစဉ်များကိုသူတို့သက်ဆိုင်ရာလက်ပေါ်ရရှိမှုအတွေ့အကြုံကို၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုသရုပ်ပြ" ဟု၎င်းကပြောသည်။
"Calrec စက်ရုံစံနှုန်းဖြစ်လာသည်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံရောနှော၏အနုပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ပြီးပြည့်စုံရွေးချယ်မှုပါပဲ။ သူတို့ကခေတ်သစ်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာကို up-to-date ဖြစ်အောင်အသိပညာနှင့်အတူအလုပ်ခွင်ဝင်ဘို့ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်အသံကအင်ဂျင်နီယာများလာမည့်မျိုးဆက်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကူညီပေးနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Chabot ရဲ့အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကိုအရန်အရေးကြီးပါသည်။ "
Calrec အသံ သီးသန့် On-လေထုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဖော်စပ်အသံအတွက်ထူးချွန်ထံအပ်နှံသည်။ 50 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကထုတ်လွှင့်အထူးကု, Calrec ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အပေါ်မှီခိုဒစ်ဂျစ်တယ် consoles စတဲ့အကွာအဝေးတီထွင်ခဲ့သည်။ ပုံထဲမှာသံကိုချပြီးအဘို့, ထုတ်လွှင့် Calrec အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုထားတော်မူ၏။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် calrec.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Calrec/Calrec_Chabot-College-Summa-Training.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Esmeralada Bautista, Chabot ကောလိပ်မှာထုတ်လွှင့်ကျောင်းသား, ထို Calrec Summa အသံ console ကိုအပေါ်လေ့။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Calrec Chabot ကောလိပ် isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော Summa အသံ Console တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-10-29
ယခင်: High Dynamic Range (HDR) Technologies က၏အနာဂတ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးနေရပ်လိပ်စာမှ SMPTE (R) နှင့်အတူမိတ်ဖက်, CCW 2015 တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်ထုတ်လုပ်
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြခန်း Sinclair ရဲ့ "Sharyl Attkisson နှင့်အတူအပြည့်အဝတိုင်း" အတွက် Show Package တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့